चिनियाँ टोलीप्रति सरकारको ‘अपमान’ ! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← देउसी भैलोको पैसा मानबिय कार्यमा
५०० र १००० का भारु साट्न बैंक जाँदै हुनुहुन्छ ? पख्नुहोस् ! →
यही कात्तिक १५ देखि १८ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएको चीनको छिङ्हाई प्रान्तका सार्वजनिक सुरक्षा मामिला प्रमुख वाङ चोङसङ नेतृत्वको टोलीले ‘अपमाजनक’ व्यवहार भोगेर फर्केको हो ।गृह मन्त्रालयको निमन्त्रणामा आएको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीलाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नभेटी फर्कादिएका हुन् । चिनियाँ टोलीले नेपालका सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग भेट्न समय मागे पनि नदिएपछि कसैलाई नभेटी उनीहरू स्वदेश फर्किएका छन् ।
गृह अधिकारीलाई भेट्ने कोसिस सफल नभएपछि उनीहरू नगरकोट घुमेर स्वदेश फर्किएका थिए । निकट छिमेकी मुलुकको प्रतिनिधिमण्डललाई कूटनीतिक परम्पराअनुसार उचित आतिथ्य र व्यवहार गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालयले उल्टो व्यवहार गरेको छ । ‘यसबाट एकातिर छिमेकी चीन नेपालसँग असन्तुष्ट बन्न पुगेको छ । अर्कातिर नेपालका सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारी र उदासीनता भल्किएको छ’, जानकार एक अधिकारीले भने ।
गृह स्रोतका अनुसार नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुखसँग भेटवार्ताका लागि समय मागेको थियो । टोली कात्तिक १८ गतेसम्म नेपाल रहे पनि गृह मन्त्रालयका अधिकारीले भेट दिएनन् । ‘परराष्ट्रमार्फत भेटवार्ताका लागि अनुरोधपत्र आएको थियो । तर गृहसचिव र शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख दुवैले भेट्नुभएन’, गृह स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो ।
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणमा व्यस्त रहनुपरेको भन्दै गृह सचिव र शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुखले चिनियाँ टोलीलाई नभेटेको स्रोतले बतायो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले भेट नपाएको विषयमा गृहसँग सोध्दा चित्तबुझ्दो जबाफ नआएको बताए ।
गृह प्रवक्ता एवं शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख बालकृष्ण पन्थीले भने चिनियाँ टोली गृहको निमन्त्रणामा नेपाल आएर फर्केको’bout आफूलाई जानकारी नरहेको दाबी गरे । ‘म यस महाशाखाको प्रमुख भएको एक महिना भयो । गृहले कुनै चिनियाँ टोलीलाई निमन्त्रणा गरेको थाहा छैन’, उनले भने ।
त्यसअघि नेपाल आएको अर्को एक चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले पनि यस्तै अपमानजनक व्यवहार नेपालको सरकारी निकायबाट भोगेको छ ।
कात्तिक २ गते नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री चाङ माओले वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीसँग भेटवार्ताका लागि समय मागेका थिए । तर गौचनले आफू व्यस्त रहेको भन्दै भेट दिएनन् । यसबाट चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट भई फर्केको वाणिज्यका अधिकारीले बताए ।
चिनियाँ मन्त्रीले वाणिज्यमन्त्री थकालीसँग नेपाल र चीनबीचको पारवहन यातायात सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ टुंग्याउने विषयमा कुराकानी गर्न चाहेको स्रोत बताउँछ । ‘तर मन्त्री थकालीले बिनाकारण चिनियाँ मन्त्रीसँग भेट्न चाहनुभएन’, स्रोतले भन्यो ।
गृह मन्त्रालयको निमन्त्रणामा आएको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीलाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नभेटी फर्कादिएका हुन् । चिनियाँ टोलीले नेपालका सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग भेट्न समय मागे पनि नदिएपछि कसैलाई नभेटी उनीहरू स्वदेश फर्किएका छन् ।
यद्यपि चिनियाँ मन्त्री नेतृत्वको उक्त टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीसँग भने भेटेको थियो ।नेपाल र चीनबीचको पारवहन यातायात सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ टुंग्याउने विषयमा छलफल गर्न गत आइतबारदेखि मंगलबारसम्मका लागि चीनको ल्हासामा हुने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ ।
‘ल्हासामा हुने भनिएको पारवहन बैठक हुन नसक्ने भन्दै अन्तिम समयमा चिनियाँ पक्षले पत्र लेख्यो । नेपालबाट चीनसँगको सम्बन्धमा गरिएका पछिल्ला गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधिको प्रतिक्रियास्वरूप त्यसो भएको हुन पनि सक्छ’, जानकार अर्का अधिकारीले भने ।कुनै पनि विदेशी सरकारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा आउँदा सो प्रतिनिधिमण्डलको दूतावासको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भेटवार्ताका लागि सहजीकरण गर्छ ।
नेपालसँग चीन असन्तुष्ट छैनः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढेका कारण चीन असन्तुष्ट बनेको भनी प्रकाशित समाचारमा सत्यता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
मंगलबार केही पत्रकारसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री महतले भने, ‘चीनविरोधी कुनै गतिविधि हुन दिएका छैनौं । हामी एक चीन नीतिप्रति अडिग छौं ।’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसँग चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधिले मंगलबार भेटेर चीन असन्तुष्ट रहेको भन्ने समाचारमा सत्यता नरहेको अवगत गराएको मन्त्री महतले बताए । ‘चीनविरोधी गतिविधि भएको भन्दै आपत्ति जनाएर चीनले कुनै पत्र लेखेको छैन’, महतले भने ।
मन्त्री महतले नेपाल आर्ट काउन्सिलमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा ताइवानको झन्डा प्रयोग गरिएको पाइएपछि गृह मन्त्रालयको पहलमा उक्त झन्डा हटाउन लगाइएको बताए । ‘ताइवानी झन्डा उक्त कार्यक्रममा राखिएको जानकारी चिनियाँ दूतावासले गराएलगत्तै हामीले पहल गरी झन्डा हटाउन लगाएको सत्य हो । त्यसबाहेक समाचारमा आएजस्ता अन्य कुरा सत्य होइनन्’, उनले भने ।
देउवाले चीनलाई चिढ्याएः शशांक
कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतमा दलाई लामालाई भेटेर चिनियाँ नागरिकलाई चिढ्याएको बताएका छन् । प्रेस युनियन कैलालीले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा उनले भने, ‘पार्टी सभापति देउवाले भारतमा गएर किन ‘फ्रि तिब्बत’ का नेतालाई भेटे ? त्यो कुरा पार्टीलाई केही थाहा छैन ।’ कांग्रेसको नीति ‘एक चीन’ भएको स्पष्ट पार्दै महामन्त्री कोइरालाले लामासँगको भेटघाट पार्टी सभापतिको व्यक्तिगत भएको पनि बताए । ‘कांग्रेस उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणको छिमेकी भारतसँग समदूरीमा बस्न चाहन्छ’, उनले भने ।
धर्मनिरपेक्षता नरुचाएका महामन्त्री कोइरालाले हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमतसंग्रहमा जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्यको पुनर्संरचनाको काम भइरहेको छ । अर्कोतिर महाभियोगको कुरा चर्चामा छ । अझ मुलकुका सामु तीनतीनवटा निर्वाचनको चुनौती छ । त्यसैले हिन्दु राष्ट्रको कुरा अहिले नै चर्चामा ल्याउनु हुँदैन’, उनले भने ।
यी सबै चुनाव सकिएपछि धर्मनिरपेक्षताका लागि जनतामा जानुको विकल्प नरहेको उनको दाबी छ । सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने र नेपालमा अंगीकृतलाई प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भारतको नैतिक आधार नभएको उनको भनाइ छ ।